Papa Francis dia miantso ny mpitondra eran'izao tontolo izao ho ao Vatican amin'ny 14 Mey 2020 hanao fifanarahana eran'izao tontolo izao: Martin Vrijland
Papa Francis, Jesuit Saint Nicholas tsy misy volombava hazo, solombavambahoaka Jesosy Kristy eto an-tany, dia niantso ny 2 ny mpitondra eran'izao tontolo izao herinandro lasa izay mba ho tonga ao Vatican amin'ny 14 tamin'ny volana Mey 2020 hanao «Pact Global '(fifanarahana manerantany). Misy zavatra roa manan-danja amin'ny fandaharam-potoana ho an'io fihaonana io izay tsy maintsy ho avy rehetra. Ny voalohany dia azo jerena ao amin'ny teniny voalohany ao anaty lahateny etsy ambany, ao izay ilazany ny rakipahalalana momba azy (antontan-taratasy matevina mavitrika ara-pinoana) avy amin'ny 2015, izay momba ny 'fiovan'ny toetr'andro'. Ny faharoa dia momba ny fampiakarana ny mponina eran-tany.
'Omeo ahy efa-taona hampianarana ny ankizy, ary ny voa nafafiko tsy hongotana na oviana na oviana", dia fanambarana manko nataon'i Vladimir Lenin. Tian'ireo papa ny hiarahan'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao ary ny fifanarahana eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy mifarana eo anelanelan'ny mpitondra eran-tany sy ny fivavahana rehetra. Zava-dehibe manan-danja: fikasana atidoha ny ankizy. ny fivorian'ny mpitondra eran'izao tontolo izao dia tena manitra fatratra ny zavatra izay toa ny resaka miafina ao ambadiky ny 'fiovan'ny toetr'andro' PsyOp: ny fananganana governemanta an'izao tontolo izao. (vakio bebe kokoa eo ambanin'ny lahatsary YouTube)
"Eny, raha ilaina ny tontolo hampiray antsika amin'ny sehatra manerantany, fandraisana an-tanana tokoa izany! Tsara ny papa!", Maro no mety hieritreritra. Ny papa mitovy dia eo amin'ny lohan'ny fiangonana iray izay tamin'ny 27 aprily 2014 dia nanambara an'i Lucifera ho Andriamanitry ny fiangonana. Mety tsy hanana olana amin'izany koa ianao, satria “Ah tsara koa raha andriamanitra dia Andriamanitra na Andriamanitra lahy na vavy na antsoina hoe Lucifer, inona no mahasamihafa azy?Tsy dia misy dikany loatra fa zava-dehibe ny ahitanao fa i Lucifera no mpanorina an'io "famoronana" io; izay antsoiko hoe 'ny simulation'.
Ny mariky ny Luciferianisme dia ny avana ary ny mpitondra eran'izao tontolo izao (na ara-politika na ara-pinoana) no mpiambina sy mpandrindra ny script master tsy maintsy mitarika amin'ny fitondram-panjak'izao tontolo izao sy ny mponina hermaphrodite izay voaomana ho 'ny lanitra vaovao sy tany vaovao'. Io "lanitra vaovao sy tany vaovao" avy amin'ireo fivavahana dia io no fiarahana miaraka amin'i AI; nantsoina koa ny maha-tokana azy. Ny tena tanjona dia ny mitolo-batana ny transhumanism ny olombelona ary tafiditra ao anatin'ny rafitra AI izay mifehy ny zava-misy iainantsika (diso). Avelao hazavaiko fa ao ambanin'ny lahatsary YouTube.
Raha mandinika ireo marika rehetra manodidina antsika isika, dia tsy ho vitantsika ny hahita fa miatrika ny zava-miafina isika (ary hatramin'ny nisian'i 27 aprily 2014) ny fivavahan'i Lucifer (jereo ny sary etsy ambony). Ny zavatra mampisafotofoto dia ny olona manana finoana ara-pinoana no mampitaha an'i Lucifera miaraka amin'ilay anjely lavo avy ao amin'ny Baiboly ary miaraka amin'i Satana. Miangavy anao aho hanafaka an'io fandaharana ara-pivavahana io. Ny fivavahana dia ao anatin'ny zava-misy simulative maro mpilalao (izay hitanay) dia endrika fifehezana ny saina mba hitazonana ny olona amin'ny alàlan'ny modely tahotra (dualistic). Ankoatr'izay, ny fivavahana samihafa dia mamorona ny polar ilaina ilaina handefasana ny sora-baventy master amin'ny lalana irina; satria ny andriambola sy ny lakilen'ny bateria dia miteraka arika mivantana amin'ny lalana iray. Zava-dehibe ny hahatakaranao fa miaina amin'ny zava-misy mitovy (na "mahatakatra") isika ary noho izany dia ilaina ihany koa ianao ity lahatsoratra ity vakio tsara aloha. Raha tsy izany, ny zava-drehetra lazaiko eto dia toa feno am-peo tanteraka ny abracadabra.
Hitantsika mazava fa ny fandaharam-potoana dia mihodina manondro ny fomba fiverin'i Lucifer. Ny fampielezankevitra transgender na 'neutral neutral' amin'izao fotoana izao dia tohanan'ny simbolin'ny avana ihany koa. Io avana io dia amin'ny angano sy tantara ara-pivavahana rehetra eran'izao tontolo izao, tandindon'ny tany vaovao aorian'ny safo-drano (jereo fanazavana). Nasehon'Andriamanitra ny avana izay tsy mbola hita tany an-danitra ho famantarana ho an'ny olona. "Ary hoy Andriamanitra: Izao no famantarana ny fanekena izay hataoko eo amiko sy aminao ary ny zava-miaina rehetra izay anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby.”, Ohatra, isika dia mahita ao amin'ny Baiboly. Izany dia famantarana ara-pivavahana. Amin'ny natiora, ny fisehoan'ny avana eny amin'ny habakabaka dia vokatry ny fahatapahan'ny jiro. Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny "Nahoana ny transgender no lasa fitsipika vaovao ho an'ny taonjato 21 ary manjavona ny heterosexual"Hoy aho fa tsy manavakavaka ny fivavahana rehetra i Lucifer Andriamanitra. I Lucifera dia antsoina koa hoe mpitifitra maivana ary noho izany ny fahatapahan'ny jiro amin'ny loko rehetra ao anaty avana dia marika iray hafa izay manondro famantarana iray miaraka amin'ny fikasohana ara-pivavahana.
Ny famantarana an'i Lucifer dia Baphomet manana loha avo roa. Noho izany, amin'ny alàlan'ny fampielezankevitra LGBTI, ny olombelona dia tsy maintsy ovaina ho "tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy" (teny mahafinaritra ho an'ny "hermaphrodite" na "bisexual"). Ny fifandraisana misy eo amin'ny sarin'ny hetsika LGBTI (ny avana) ary i Lucifer dia tena mazava ho anao aminao. Izahay dia mitory ny resaka Luciferian ny fanovana an'izao tontolo izao. Tsy maintsy misy tondra-drano vaovao, toy io. Ary efa akaiky io tondra-drano io. Amin'ny alalàn'ny transgenderism (ho an'ny lehilahy bisexual hermaphrodite) dia vonona amin'ny transhumanism isika, ny fampifangaroana an'i AI sy ny fiakaran'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao.
Ao amin'ny ahy boky vaovao Manazava amin'ny an-tsipiriany aho ny antony mahatonga ny faminaniana avy amin'ny antokom-pivavahana isan-karazany amin'ny anjara asan'ny script master, izay iarahan'ny Vatican sy ny ra aristokratika. Manazava ihany koa aho fa izy ireo dia avatar ao amin'ity simulation ity izay tarihin'ny mpanamboatra an'io simulation io. Mandefa ny script master ho enti-mandresy lahatra ny olombelona ny hanaovan-tsitrapo an-tsitrapo amin'ny drafitr'i Lucifer. Ilaina ny 'an-tsitrapo', satria ny mpilalao tany am-boalohany ny simulation (ny fahatsiarovanao) dia tsy maintsy misafidy malalaka (fa raha tsy izany dia tsy ho simulasi, fa horonantsary deterministic). Ny faminaniana isan-karazany dia miresaka ny fahatongavan'ny mesia avy any an-danitra. Eny, ny fivavahana samy hafa dia manana fomba fijery mifanohitra, saingy izany fifandirana izany dia ilaina hanaitra ny fahalalam-pomba tsy maintsy hitarika ady farany manodidina an'i Jerosalema sy hamoronana filaminana ao anatin'ny korontana.
Ny horonantsary (andrasan'ny mpino) dia hivoaka avy amin'ny 'lanitra'. Ankehitriny dia matetika isika mahita ny teny hoe 'lanitra' rehefa manangona ny rakitsorantsika. Izahay dia manao izany ao amin'ny 'rahona'. Ilay mesia amin'ilay 'lanitra vaovao sy tany vaovao' dia mety hidina avy any 'rahona' ary handresy lahatra antsika fa afaka hiakatra an-tsitrapo ao amin'ny 'lanitra vaovao sy tany vaovao' isika. Ray Kurzweil (CEO ao amin'ny Google) dia nambara tao amin'ny bokiny hoe "Akaiky ny Singularity 'fa amin'ny ho avy dia ho afaka miaina simulasi izay tsy afaka manavaka amin'ny tena izy isika. Lazaiko fa ny 'lanitra sy tany vaovao' ao amin'ny mesia no antenaina dia noho izany dia ho simulasi ihany. Natao hamoizan'ny olombelona ny endriny biolojika (ny tena izy dia tsy misy, satria efa "miaina ao anaty simulasi" isika) ary mametraka ny fahatsapan-tena tany am-boalohany (izay tena misy antsika) miaraka amin'ny Luciferian AI (izay izao tontolo izao ankehitriny) mandeha ny simulation). Namariparitako ny tanjon'ity zava-nitranga ity tamin'ny ahy boky vaovao, saingy azo fintina toy izao manaraka izao: Ny virus Luciferian AI dia te hampiasa ny fehezan-dalàna famoronana (cell cell) ao amin'ny fahalalantsika tany am-boalohany ho "ny sela misy ny sela”Hiditra amin'ny famotehana mba hamotehana izao tontolo izao (izay misy antsika mpamorona).
Ny Vatican no manana andraikitra fototra ao amin'ny mba hanangana governemanta manerantany izay hipetrahan'i Luciferian avatar messiah eo amin'ny seza fiandrianana. Ity mesia ity dia ho avy hitondra ny "lanitra vaovao sy ny tany vaovao" ary ny "Jerosalema vaovao." Tokony hieritreritra simulation vaovao ianao amin'izay. Izany fahatsapana fanavotana amin'ny alàlan'ny mesia sy ny fampanantenan'ny lanitra sy tany vaovao sy ny fiainana mandrakizay (transhumanism), na izany aza dia fandrika honeypot izay mandrisika ny olombelona hanolo-tena amin'ny Luciferian AI izay mitantana ny simulasi virus ankehitriny. Tsiahivina isika hifangaro amin'ny rafitry ny tsimokaretina AI: ny rafitry ny virus Luciferian AI izay mitantana ny simulasi ankehitriny. Aza mianjera amin'izany!
Tags: 14 May 2020, 2020, Featured, Francis, maneran-, fifanarahana, Papa, governemanta iraisam-pirenena
26 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 11
Oh eny .. tokoa:
Tonga eo akaikin'ny Vavahady Star Vatican Star amin'ny Tendrombohitra Graham any Tucson, Arizona (Etazonia) no naorina ny teleskopera LUCIFER:
Telolopolo binocular lehibe akaikin'ny infra-parara
Sehatra ho an'ny
26 Septambra 2019 ao amin'ny 22: 09
Fanontaniana avy amin'ny mpamaky iray izay navoakako teto fotsiny, anisan'izany ny valinteniko:
"Koa ve i Lucifer no virus izay maniry ny hamely ilay Lohateny?"
"Ny loharano dia ny" toerana "/" sela sela "miaraka amin'ny angona rehetra avy amin'ny siansa rehetra izay tonga (" niavian'ny ") avy amin'ny fahatsiarovan-tena?"
Eny, ny loharano dia, toy ny teo ihany, ny kaody tafiditra ao (izay antsoina hoe 'superposition' amin'ny fizika fizika): ny sela sela amin'ny zava-drehetra.
Ny sela feno Totipotent dia miforona avy amin'ilay sela mpiorina: ny endriky ny fahatsiarovan-tena miaraka amin'ny asa famoronana tokana. Ireny sela tototototra ireny dia manampy (manampy amin'ny fananganana / mamorona) ny ampahan'ny tontolon'ny tany am-boalohany, tahaka ny sela misy totipotent izay manampy amin'ny famolavolana taova, taova, sns ny vatana.
Koa isika dia ireo karazana endrika fahatsiarovan-tena izay manana kaody mamorona ao anatintsika (izay avy amin'ny sela fitahirizan'izay rehetra misy).
Amin'ny fitaomana antsika hifandray amin'ny rafitry ny tsimok'aretina (amin'ny alàlan'ny tsy fitovian'i Kurzweil diso) ny otrik'aretina Lucifer dia mahazo fidirana amin'ny kaody misy antsika ary ahafahany mandroba ny sela mitsoka loharano.
Ny vaovao tsara dia ny fanananay code ihany koa hiadiana amin'ilay virus. Ka afaka / manao izany isika amin'ny fampahatsiahivana indray ny tenantsika fa mahatsiaro tena isika (sela totipotent sela). Ka tsy mila mikaroha intsony amin'ity vatana ity isika (ny avatar amin'io simizina virus io) fa miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena. Ity vatany ity dia avatar izay ahitantsika ao anatin'ity simulation virus ity (hianarana ilay virus).
26 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 31
Mitohy ny valiny:
"Amin'ny sela stem dia heveriko fa data misongadina / Sim / projection sy fahatsiarovan-tena dia ny famaritana tsy manam-petra ny mpandinika an'io data io na ny sahan'asa / sarin'ny Sim"
Miaraka amin'io 'cell cell of all of all' izany no tiako lazaina: ny angon-drakitra amin'ny superposition (izay mety mbola ao anatiny rehetra). Ny sela fitotozy dia manana faritra ambanin'ny 'sela sela amin'ny zava-drehetra' ary noho izany koa dia i superposition ao anatin'ny faritaniny. Ny fahatsiarovan-tena noho izany dia ny fomba famoronana voalohany nipoitra avy amin'ny loharano. Raha fintinina, ny sela mitambotant dia mivoaka avy amin'ny sela miraikitra (amin'ny sary alaina).
Noho izany ny fahatsiarovan-tena dia avy amin'ny kaody loharano (andao lazaina hoe sela sela izay misy ny fampahalalana rehetra amin'ny 'superposition'). Nanome endrika fahatsiarovan-tena ny kaody famantarana. Ny fahatsiarovan-tena dia manomboka mamorona; izay manana ny asany avy avokoa. Ny fahatsiarovan-tena no endrika voalohany amin'ny iraka isam-batan'olona.
Ireo karazana fahatsiarovan-tena tsirairay avy (avy amin'ny loharano / 'sela sela rehetra izay' / 'ny loharanom-baovao amin'ny superposition') dia namorona ampahany iray amin'ny tontolo voalohany.
Ny fahatsiarovan-tena koa noho izany dia mpitazana ary amin'ny fotoana iray ihany dia mpiara-manorina ny tontolo tany am-boalohany. Izao rehetra izao dia ny fikasana ara-materialy (na fanehoana) ny fananana fiaraha-mientana an-tsaina ireo famoronana fahatsiarovan-tena ireo. Ka dia isika tenany no mpanamboatra ny simulation izao tontolo izao (na mety ho tsara kokoa aza: "izao tontolo izao ny materialization"); avy amin'izao tontolo izao tany am-boalohany.
Ny fahatsiarovan-tena koa noho izany dia mpamorona (miaraka amina endrika hafa rehetra) ary miaraka amin'ny mpandinika ny tontolo (tany am-boalohany).
Ity simulasi virus ankehitriny / izao tontolo izao (izay hitantsika amin'ny alàlan'ny avatar antsika) dia kopikin'ny mahadiso azy fotsiny, izay hitantsika izao. Namboarina hangalatra ny kaody misy antsika sy ahafahany mampiditra ny loharanom-baovao.
27 Septambra 2019 ao amin'ny 00: 44
Ny lalao lehibe indrindra hoe 'Problem, Reaction, Solution' izay mivoatra dia ny hoe ho simba ny tontolo iainana ka tsy hisy famonjena intsony ary hisy ny antsoantso hoe "lanitra vaovao sy tany vaovao" (natolotr'i messiah) tonga. Mazava ho azy fa handray anjara lehibe koa ny ady lehibe iray. Ny olombelona dia handray an'ity tontolo vaovao simulative ity miaraka amin'ny sandry misokatra ary hianjera amin'ny fandrika Luciferian AI.
27 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 51
I Sina no mitarika ny lalana amin'ny haitao ara-teknolojia mahazatra.
27 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 17
Efa hitantsika ny dingana voalohany mankany amin'ilay tontolon'ny zava-misy virtoaly. Manomboka amin'ny zava-misy mitombo:
27 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 25
27 Septambra 2019 ao amin'ny 19: 03
2020 dia taona mitsambikina (taona mitsambikimbikina) ary koa amin'ny taona izay hanatanterahana an-tsokosoko ny tahiry 5g ho an'ny IoT. Amsterdam (Arena) dia ho laboratoara fitsapana mahafinaritra
28 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 26
Izaho ve sa izaho no tsy napetraka matetika ny soratako ?!
28 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 32
Miankina amin'ny mpanelanelana
« "Ny zava-misy araka ny fahitanay azy" boky Martin Vrijland dia azo alaina izao
Andian-tsoratra ho an'ny resaka (TTS) sy holograma toa an'i Microsoft Hololens 2 »
Total visits: 16.048.440
Ben op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1